Ukumaketha Kwamaselula: Shayela Ukuthengisa Kwakho Ngalezi Zindlela Ezi-5 | Martech Zone
Ukumaketha Kwamaselula: Shayela Ukuthengisa Kwakho Ngalezi Zindlela ezi-5
Ekupheleni kwalo nyaka, ngaphezulu kwama-80% abantu abadala baseMelika bazoba ne-smartphone. Amadivayisi eselula alawula izingqimba zeB2B neB2C futhi ukusetshenziswa kwabo kulawula ukumaketha. Konke esikwenzayo manje kunengxenye yeselula ekufanele siyifake kumasu ethu wokumaketha.
Kuyini ukumaketha kwamaselula
Ukumaketha kwamaselula ukumaketha kuvuliwe noma kunedivayisi yeselula, njenge-smart phone. Ukumakethwa kwamaselula kunganikeza amakhasimende imininingwane ebucayi yesikhathi nendawo, eyenzelwe wena, neye-portport ekhuthaza izimpahla, izinsizakalo nemibono.
Ubuchwepheshe bokumaketha beselula buhlanganisa ukuthumela imiyalezo (SMS), ukuphequlula iselula, i-imeyili ephathekayo, izinkokhelo zeselula, ukukhangisa kweselula, ezentengiselwano zeselula, ubuchwepheshe bokuchofoza ukuze ushayele, nezinhlelo zokusebenza zeselula. Ukumakethwa komphakathi kuphethe futhi indawo yezentengiso ephathekayo.
Uma ungavivinywanga i- ukumaketha amaselula amasu, i-Eliv8 isungule le infographic elula futhi enamandla lapho ungakwazi khona (futhi kufanele) ukuqhuba ukuthengisa ngemizamo yakho yokumaketha ephathekayo:
Yenza ukushaya kube lula - Kusuka kokuchofoza-ukubiza izinhlelo zokusebenza ukuya ku- shayela izixhumanisi ezilungiselelwe.
Ukunikezwa kokungena - Sebenzisa i-Yelp, i-Facebook, i-Foursquare (i-Swarm) ukuhlanganisa okunikezwayo kulabo bantu abangena futhi abathembekile endaweni yakho yokuthengisa.
Umbhalo Nemikhankaso ye-SMS - Akukho okufika ngesikhathi futhi okusebenzayo kumakhasimende ahehayo… kuphumelela izikhathi eziphindwe kasishiyagalombili kune-imeyili lapho amasu akho e-SMS elungiselelwe.
Ibhokisi lokungenayo leselula - Ngaphezu kwengxenye yawo wonke ama-imeyili kuyafundwa (futhi kuyasuswa) kuselula. Ukuqinisekisa i- ama-imeyili aphendula iselula devices kufanele.
Iselula-Okokuqala - Hlakulela isu lokuqala leselula. Cishe isigamu sabo bonke abantu cishe ngeke sibuyele kusayithi lakho uma besingasebenzi kuselula.
Banikeze ngemininingwane nezeluleko ezinhle ukukusiza usebenzise amasu wokumaketha eselula:
Tags: ngena ngemvumechofoza ukuze ushayefacebook wendawoezineinombolo yocingo yokuxhumanisaiselula kuqalaibhokisi lokungenayo leselulaukumaketha amaselulaisu lokumaketha eselulaizingcingo eziphathwayoi-imeyili ephendulayo yeselulauswebezaneYelp
Imibiko yamahhala yabantu? Ngiyabonga Facebook!